ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသောဘုရား၊ အပိုင်း (၂) | The Great and Terrible God - Part II | Real Conversion
ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသောဘုရား၊ အပိုင်း (၂)
THE GREAT AND TERRIBLE GOD – PART II
ဒေါက်တာ အာရ်အာယ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်၏၊
၂၀၁၂၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်။
Lord’s Day Evening, February 5, 2012
“ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ကောင်းသောဘုရား” (နေဟမိ ၁း၁၅)။
“အလွန်ကြီးမြတ်၍၊ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်တော်မူသော အရှင်ဘုရားသခင်”
ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ရေးသားသော “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” ဟူသောဆောင်းပါးမှ ထပ်မံ၍ ကိုးကားပြီးဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဘုရားသခင်၏ ဓါးစာစောင် ၁၉၇၇ စာမျက်နှာ ၇-၃၈)
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က၊ ဘုရားသခင်သည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော ဘုရားဟုမိန့်ကြား ထားပါသည်။ ထိုဘုရားသခင်သည် သင်ထုလုပ်ထားသောဘုရား မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်သက်ဝင် ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုဘုရားသခင်သည် “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင် သည် “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ထို ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့အား တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။
အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးနောက်ပိုင်း အာဒံပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကိုယ်တော်၏ အသံကိုကျွန်ုပ်ကြားလျှင်၊ အ ဝတ်အချည်းစည်းရှိသောကြောင့် ကြောက်၍ ပုန်းလျှက်နေပါသည်ဟု လျှောက်လေ၏ (ကမ္ဘာ၃း၁၀)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်းယံအချိန်၌ ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံနှင့် ပဠိညဉ်ချုပ်ဆိုသော အခါ “ထူသောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့၍ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏(ကမ္ဘာ ၁၅း၁၂) ဟုရေးသားဖော်ပြ ထားပါသည်။ ယောဘပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ငါသည် အိပ်၍သက်သာမည်။ ငါ့ကုတင်သည် ချမ်းသာပေးမည်ဟု ငါဆိုဆိုလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကြောက်မက်ဖွယ်သောအိပ်မက်ကို ပေးတော်မူ၏။ ညဉ့်ရူပါရုံအားဖြင့် ငါ့ကို ထိတ်လန့်စေတော်မူ၏ (ယောဘ ၇း၁၃-၁၄)။
ဘုရားသခင်သည် ရေလွမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် နောဧကိုသတိပေးတော်မူသောအခါ နောဧသည် “ကြောက် သောစိတ်ရှိ၍ မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ သဘောFကိုတည်ဆောက်လေ၏ (ဟေဗြဲ ၁၁း ၇)။ ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်အားဗေသလ၌ ထင်ရှားသောအခါ “အဘယ်မျှလောက် ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်သည်တကား” (ကမ္ဘာ ၂၈း၁၇) ဟူ၍ယာကုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ဆာလံဆရာကြီးကလည်း “ကိုယ်တော်ကို အကျွန်ုပ်ထိတ်လန့်၍ ကြက်သီးမွေးညှင်းထလျှက်၊ စီရင်တော်မူချက်တို့ကို ကြောက်ရွံ့ပါ၏ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၂၀) ဟူ၍မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် အလိုတော်ကို ဒံယေလအား ထင်ရှားဖော်ပြပြီး သောအခါ၊ ဒံယေလက “ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ ပျက်ဝပ်လျှုက်နေ၏ (ဒံယေလ ၈း၁၇)ဟူ၍ ပြောကြား ခဲ့သည်။ ဟဗက္ကုတ်ကလည်း “အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ ဗျာဒိတ်တေ်သံကို ကြား၍ကြောက်ရွံ့ပါပြီ။ (ဟဗက္ကုတ် ၃း၂)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်တို့အားဖြင့် ကောနေလိ ကို မိန့်ကြားတော်မူသောအခါ၊ “ကောင်းကင်တမန်ကိုစေ့စေ့ ကြည့်လျှင် ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍” (တမန် ၁ဝး၄)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ကောနေလိသည် “ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သူ” ဖြစ်သည်ကို အ ကျွန်ုfပ်တို့သိရှိကြပါသည် (တမန် ၁ဝး၂၂)။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုက၊ ကောနေလိနှင့်အိမ် သူ^သားများ အားပြောကြားသည်မှာ “ထိုအခါပေတရုသည် နုတ်ကိုဖွင့်၍ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင် သည် လူမျက်နှာကို မှတ်တော်မမူ၊ လူအမျိုးမျိုးတို့တွင် ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့၍ တရားသဖြင့် ကျင့်ဆောင်သောသူသည် အထံတော်၌ မျက်နှာရသည်ကို ငါသိမြင်၏ (တမန် ၁ဝး၃၄-၃၅)ဟူ၍ ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဘုရားသခင်သည် လူတို့အား ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေ ပါသည်။
ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ် ရိုက်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “အကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် သော ဘုရားသခင်ကို ကြောက်သင့်သည်” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဟူ သည် ကြီးမားသော မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအရာသည် ခရစ် ယာန်တို့၏ မြင့်မြတ်သောစရိတ္တနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော နောင်တရရှိခြင်းတွင် မရှိမနေ၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် မြင့်မြတ်သောစရိတ္တပါရပါမည်” (ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် ဒီ.ဒီ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီး မြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” in The Great and Terrible God, Sword of the Lord Foundation, 1977 edition, p.14).
ဘုရားဟူသည် “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား” (ဒံယေလ ၉း၄) ဖြစ်သည် ဟုမိန့်တော်မူပါ သည်။ “ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား”(နေဟမိ ၁း၅)။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတိုင်းတို့အား ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်သည်ဟု ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။
တစ်ကြိမ်တခါတုန်းက လူသားလင်မယား နှစ်ယောက်တို့သည် ဖျားနာခြင်းမရှိ၊ ရောဂါဘယမရှိ၊ ပြင်းထန်သော ခံစားချက်ဟူ၍မရှိ၊ လိုတိုင်းရသော ပါရဒိသုဘုံနန်းစံ၍ အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာ၌ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော သားရဲများလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ထိုနေရာ၌ ရောဂါဘယ မရှိခဲ့ပါ။ ဆူးပင်ပေါင်းပင် များလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်သည်၊ သူသဏ္ဍာန်နှင့် တစ်ဏ္ဍာန်တည်းဖန်ဆင်းခဲ့သော လူသားတို့နှင့် ဥယျာဉ်တော်၌ အတူသွားလာနေခဲ့ကြပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း လူသားအာဒံသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အပြစ်ပြုခဲ့ပါသည်။ မကြာမှီဘုရားသခင်သည် လူသားမိန်းမနှင့် ယောင်္ကျားတို့အား ဧဒံဥယျာဉ်တော်မှ အမျက်ဒေါသနှင့် နှင်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ လူသားထုတစ်လုံးအတွက် သေခြင်းဖြစ်ကြပြီး၊ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်၊ ထိုသူနှစ်ဦးတို့လည်း ငရဲထဲကျရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထာ၀ရဘုရား၏ မျက်မှောက်တော်မှ ကွယ်ပျောက်ရကြမည်။
ထိုသူနှစ်ဦး၏ အပြစ်ကြောင့်၊ ယနေ့လူသားထုတစ်ခုလုံး အပြစ်သားအဖြစ်နှင့် အသက်ရှင်လာရကြ သည်။ သေခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်များက သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲစီးဆင်းနေပေပြီ။ ယခုဆိုလျှင် မောပန်း ခြင်းနှင့် ဘ၀အတွက် ရုန်းကန်းရကြပြီ။ မကြာမှီ သူတို့ဆံပင်သည်လည်း ရှည်လျှားစွာပေါက်လာ ခဲ့သည်။ သူတို့ အရိုးအဆစ်တို့သည်လည်း မာတောင့်လာနေပေကြပြီ။ သေခြင်းသည် လူသားထုတစ်ခု လုံးကို စိုးမိုးနေပေ ပြီ။ ဧ၀သည်လည်း ဝေဒနာပြင်းစွာ ခံစားပြီးမှသားကို ဖွားမြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုသားသည် လည်းအပြစ်သား ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ လူသတ်သမားဖြစ်လာပြီး မိမိနေရာမှနှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ယခုဆိုလျှင်၊ သူတို့သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံများကို လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ဆွတ်ခူး၍ မရတော့ပေ။ အာဒံသည် နဖူးမှခြေဖျားထိတိုင်ချွေးထွက်ပြီးမှ မြေအသီးအနှံကို ဆွတ်ခူးရပါသည်။ တရိ စ္ဆာန်များလည်း လူသားတို့၏ ရန်သူဖြစ်လာကြပြီ။ ဆူးပင်များလည်း လူသားတို့အား နှောက်ယှက်ပြီး အင်းဆက်ပိုးများကလည်း အသီးအနှံကို ဖျက်ဆီးနေပြီဖြစ်သည်။ လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေလွမ်းမိုး ခြင်း၊ အပူလှိုင်းများကျရောက်ခြင်းနှင့် အအေးလှိုင်းများဖြတ်သန်းခြင်းစသော ဘေးဒဏ်ကို ခံစားရကြပြီ ဖြစ်သည်။ ရောဂါဘယထူခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားကြရပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုfပ်တို့ သည် ကျိန်ခြင်းခံနေသော ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌ အသက်ရှင်ရကြပြီ! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသသည် လူသားထုတစ်ခုလုံး အပေါ်၌ တည်လျှက်ရှိသည်!
အာဒံသည် ဧ၀ကိုတွေ့ချင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြင့် ရောက်ရှိ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သူမ၌ အပြုံးမျက်နှာ၊ သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းနှင့် ချိုမြသောအပြုံးပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အပြစ်သားဘ၀တွင် သူမ၏မျက်နှာပေါ်၌လည်း အရေးအကြောင်းများ၊ စိုးရိမ်ပူပန် ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာများကြောင့် အိုမင်ရင့်ရော်နေပေပြီ။ မကြာခင်သူတို့နှစ်ဦးသည် သားကြီးက သားငယ် အဗေလကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သောကြောင့် ထိတ်လန့်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီ။ မကြာမှီ၊ သူ့သားကာ ဣနကို ကျန်သောသားများက မုန်းတီးလာကြသောကြောင့် အာဒံနှင့်ဧ၀တို့သည် နှလုံးကြေကွဲခြင်း တွေ့ ကြုံခံစားရကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်၊ ထိုကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာကို လူသားတို့အပေါ်ကျရောက်စေသောကြောင့်၊ ငိုကြွေး ခြင်း၊ အိုလာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် သေခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားရှင်သည် အပြစ်ကို မုန်းတီးသည်! အမျက်တော်ကို နောင်တမရသော သူတို့အပေါ်သွန်းလောင်းနေ သည်! သေခြင်းမျိုးစေ့သည် အပြစ်၌ ပါတ်သက်နေပြီး ဘုရားရှင်သည် အပြစ်ကိုစီရင်သည်။ ဘုရားရှင် သည် တရားသူကြီးဖြစ်၍ အပြစ်သားများကို စီရင်နေသည်။ ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော ဘုရားသည် အာဒံနှင့်ဧ၀ကို ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှ နှင်ထုတ်ခဲ့ပြီး သူ၏မီးစက်လက်နတ်ဖြင့် အပြစ်များ၊ မဝင်ရောက်စေရန် ကာကွယ်ဆီးတားပြီးဖြစ်သည်! အို! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသောဘုရားသည် အပြစ်ကြောင့် သေခြင်းငရဲထိတိုင် လူသားတို့ကို ကျရောက်စေခဲ့ပြီ!
ဤကမ္ဘာလောကထဲရှိ ဘုရားသခင်မထိန်းချုပ်နိုင်သော အရာရှိနိုင်သည်ဟု မထင်လိုက်ပါနှင့်။ ဘု ရားသခင်မထိန်းချုပ်နိုင်သော အကြောင်းအရာရှိမည်ဟုလည်း မထင်လိုက်ပါနှင့်။ အမျက်အငြိုးနှင့် စစ်တိုက် နေသောကမ္ဘာ့သမိုင်းကို ကြည့်သော်၊ အမျက်ဒေါသဖြင့် တိုက်ခိုက်ကြသည်။ ဘုရားရှင်သည် လည်း ဖြောင့်မတ်သောဘုရားဖြစ်၍ အပြစ်ကဆန့်ကျင်လာသောအခါ၊ အပြစ်ကို တရားစီရင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သွေးစွန်းတိုက်ခိုက်မှုများ၊ မျက်ရည်စီးကျငိုယိုခြင်းများ၊ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်သေခြင်း တို့ကို ထောက်သော်၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သော ဘုရားသခင်သည် သူ့အမျက်ဒေါသကို အပြစ် သားတို့ အပေါ်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အို! ကြောက်လန့်ဖွယ်ဘုရား! ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မက်ဖွယ် သောဘုရား!
နောက်အပတ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရား၏ ဣသရေလတို့၏ အပြစ်အပေါ်မည်ကဲ့သို့ စီရင်ချက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည်ကို ကြားနာကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကနေ့ ည ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားနှင့် ကြောက်စရာကောင်းသော မီးငရဲအကြောင်းကို စဉ်းစားတွေးခေါ်စေလို ပါသည်။ ငရဲကို ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ထိုအရှင်ကိုမုန်းတီးစရာထက်၊ အခြားအကြောင်းများလည်း ရှိနေအုံးမည်။ ဗိုတေးလ်၊ သောမပိုင်၊ အိပ်ခ်ျဂျီဝေးလ်နှင့် ရောဘတ်အိန်ဂေဆောလ် ကဲ့သို့သော ဘုရားမဲ့ ဝါဒီသမားများက ငရဲကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားကို မုန်းတီးကြပါသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီသမားများသည် ငရဲကို သာမုန်းတီးနေကြခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။ အယူလွဲယုံကြည်သူတို့က လည်း သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ် ၌ ဖော်ပြထားသောငရဲကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့! မော်မန်၊ ယေဟောဝါသက်သေခံများ၊ ခရစ်ယာန်သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ နယူးအိပ်ခ်ျ သူတို့အားလုံးတို့သည် အပြစ်ငရဲထဲ အပြစ်သားတို့အား၊ ပို့နေ သည်ကို မုန်းတီးနေကြသည်!
ဘုရားမဲ့ဝါဒီသမားများနှင့် အယူလွဲယုံကြည်သူများသည် ငရဲကိုမုန်းတီးနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရ သည်။ ယနေ့လွဲမှားသော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများလည်း၊ အပြစ်သားတို့အား ငရဲထဲချလိုက်ခြင်းကို ယနေ့မလိုလားသူများ အသင်းတော်ထဲရှိနေကြသည်။ ယနေ့ ကျမ်းစာကျောင်းများ ထာ၀ရ ငရဲကို ငြင်းပယ်နေကြသည်ကို ယနေ့အသင်းသူ^သားများ ယုံကြည်ရန်အခက်တွေ့စေပါသည်။ ကြီးမြတ် ၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသာ ဘုရားရှင်၏ သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို ငြင်းဆန်နေသော၊ ကျောင်းမှ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းပြီးလာခဲ့သည်။ ထို ကျောင်းတို့၌ ထာ၀ရမီးငရဲရှိသည်ကို ရယ်စရာအဖြစ်သို့ထင်ကြသည်။ ရောဘယ်လ်သည် မိမိကိုယ်ကို ဟုအခေါ်ခံသည်၊ သူသည်ထာ၀ရအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော စာအုပ်မြောက်များ စွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ အပြစ်သားများကို ထိုငရဲသို့ပို့ခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေသားခဲ့သည်။
ရောဘယ်လ်သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ပါဆာဒန်နာ မှ အပြစ်ငရဲ နှင့်ပါတ်သတ်၍ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်များအား ငြင်းဆန်မှုကို လေ့လာသင်ကြားသူဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀၊ ခုနှစ် ၌ ကျွန်ုပ်ပညာသင်ယူနေစဉ်၊ ပါမောက္ခ ကြီးက ကို ဖတ်ရှုလေ့လာရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဂျော့ခ်ျ အေ.ဘက် ထ ရိက်ခ်သည် အယ်ဒီတာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တို့ကို ဆန့်ကျင်သူ ဖြစ်သည်။ အယ်ဒီ တာ၊ ဒေါက်တာဂျော့ခ်ျ ဘက်ထရိက်ခ်သည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားရှင်၏ သမ္မာကျမ်းစာကို တိုက်ခိုက်သောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုသူပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ထိုကဲ့သို့ဘုရားသည်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ တရားစီရင်အမိန့်ချမှတ်တကဲ့သို့ ထိုဘုရားလည်းဖြစ်၏ ဟုဆိုသည် “သင် တို့၏ဘုရားသည် မကောင်းဆိုးဝါး” ဖြစ်သည်ဟု၏။ ထိုကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်၍ အနက်ဖွင့်ကျမ်းများကို ရေးသားသူတို့သည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဘုရားကို မကောင်းဆိုးဝါး” ဟူ၍ ခေါ်ကြသည်! ဒေါက်တာ ဂျီ၊ ဘရောင်းမလီအောစ်နန်း၊ လွတ်လပ်ဓမ္မအတွေး အခေါ် ဘီချော့ကလည်း၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားကို “အကျင့်ယုတ်သူ” ဟူ၍ ခေါ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဘွဲရခဲ့သော ၌လည်း ထိုကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ကို ပြောကြားခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်kပ်အတွေးထဲ၌ ထိုကဲ့သို့ သမ္မာကျမ်း စာတော်အပေါ် မိမိတို့၏အမြင်နှင့် ရှုပ်ထွေးနေပြီး သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို အနိုင်ယူလိုသောသူ ဖြစ် သည်ဟုထင်မိပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ထိုကဲ့သို့သော သူတို့သည် ဘယ်တော့အခါမှ အသစ်မွေးဖွား ခြင်းမခံရသော သူများဖြစ်သည်ကို သဘောပေါက်မိသည်။ ဤလောက၏ဘုရား၊ စာတန်က “ဤလော ကကိုအစိုးရ သောဘုရားသည် သူတို့၏ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေ၏” (၂ ကော၄း၄)၌ ဖော်ပြထားပါ သည်။
ဒံယေလပီ. ဖူလာကဲ့သို့၊ ကောင်းသောပုံစံနမူနာကို ယူတတ်ရပါမည်။ သူ့အဖေသည် နာမည်ကျော် ကြားသော ဧဝံဂေလိဆရာကြီးချာလ်အီး၊ ဖူလာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သူ့အဖေသည် “ခေတ်ဆန်သော ခရစ်ယာန်အတွေးအခေါ်သမားဖြစ်သည်။ သူ၏သားလက်ကိုကိုင်၍ ဆုတောင်းပြီးအသစ်သော အသက် တာ၌ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ၊ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူဖို့ အတင်းတွန်းသောသူဖြစ်သည်။ ဖူလာသမ္မာကျမ်းစာ တော်ကျောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ သူသည် နုတ်ကပတ်တော်ထက် သူ့သားအား ပိုချစ်ခဲ့သည်။ ခါလ်ဘက်တ်ကဲ့သို့၊ ကျမ်းစာကျောင်း၌ ဓမ္မပညာသင်ကြားရန်၊ ဆွတ်ဇလန်နိုင်ငံ ဘယ်ဆယ်မြို့ သို့စေလွတ်ခဲ့သည်။ ဒံယေလဖူလာသည် ၎င်းကျမ်းစာကျောင်းမှပြန်လာ ပြီးသူ့အဖေ၏ သမ္မာကျမ်းစာ ကျောင်း၌ ပါဝင်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ဖူလာဓမ္မကျမ်းစာကျောင်း၌၊ ရော ဘယ်လ်သည် ထာ၀ရအပြစ်စီ ရင် ခြင်းကို ငြင်းဆန်ဖို့သင်ယူခဲ့သော နေရာဖြစ်ပါသည်။ (See Harold Lindsell, Ph,D., The Strange Case of Fuller Theological Seminary,” The Battle For the Bible, Zondervan Publishing House, 1976, pp. 106-121).
“ဒုစရိုက်ကို ပြုသောသူသည်လည်း ကောင်းသောအမှုများကို ဖျက်ဆီးတတ်၏ (ဒေသနာ ၉း၁၈)။
ဖူလာဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းက၊ ဒံယေလ.ပီဖူလာ၏ ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေခဲ့သည်။ မာန်မာနနှင့်နိမ့်ချ ခြင်းမရှိ၊ မိမိတို့၏ အပြစ်ကို မသိမမှတ်၊ စစ်မှန်စွာမပြောင်းလဲပဲ၊ လွတ်လပ်စွာ အတွေးအခေါ်သမားဖြစ် စေပြီး မပြောင်းလဲနိုင်သော သမ္မာကျမ်းစာတော်၏ အမှန်တရားနှင့် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘု ရားသခင်ကို မကြောက်၊ အပြစ်၏အခအတွက်ငရဲ၌ ပြစ်ဒဏ်ခံစေမယ့် ဘုရားကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူငယ်များအား စစ်မှန်သော အသက်တာ၌ မပြောင်းလဲခင်၊ ယနေ့အသင်း တော်များက တစ်ယောက်တည်းလွတ်မထားသင့်ဘူး “ခွင့်မပြုသင့်ပေဘူး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း မခံရဘဲနဲ့ အသက်ရှင်သော ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်မရှင်ခင် တစ်ကိုယ်တည်းလွတ်မ ထားသင့် ပေ!
ဘုရားသခင်သည်၊ အသစ်ပြုပြင်မပြောင်းလဲသော အပြစ်သားတို့ကို ထာ၀ရမီးငရဲထဲသို့ ချပစ် မည်ဖြစ်သည်။ မီးငရဲဟူသည် ကြောက်စရာကောင်းပြီး ရွံမုန်းစရာကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်ကို တွေး ကြောက်ရပါမည်။ မီးငရဲဟူသည် ကြီးမြတ်၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ဘုရား၏ အမျက်ဒေါသ၊ အပြစ် ကို မုန်းတီးခြင်းကို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာရိုက်စ် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ငရဲဟူသည် မီးတောက်လောင်၍ ကြောက်လန့်စရာ” ဖြစ်သည်ဆို၏။ လေယာဉ်ပျံပျက်ကျတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်မောင်းသည် မီး လောင်နေသော စက်ခန်းထဲမီး အလောင်ခံရသည်။ မီးကတစပြီးတစ လောင်လာသည်၊ ထိုအခါယာဉ် မောင်းသည်ကြောက်လန်းပြီး ငိုကြွေးနေသည်။ ထိုအခါ၊ အနီးအနားရှိ လူတို့အားဝေဒနာမှ သက်တာရန် သူ့အား အသေပစ်သတ်ရန် တောင်းဆိုနေပေသည်။ (ရဲသား) အာဏာပိုင်များက ကယ်တင်လို့လည်းမရ၊ ဝေဒနာမှ သက်တာရန်သူ၏ ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်! ထိုကဲ့သို့ ကြောက်လန့်ဖွယ်ကို အတွေးထဲ၌ပင် ဘယ်လိုမှခံစား၍မရ ဖြစ်သည်။ ငရဲ၌လည်း၊ ကြီးမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားသခင် သည် ထာ၀ရမီးလောင်စေမည်ဖြစ်သည်! နာကျင်ခြင်းဝေဒနာသည် တိုး၍တိုး၍ နာကျင်နေမည်ဖြစ်သည်! မီးလည်းပို၍ လောင်လာမည်! ထိုအခါလူသည်၊ ယေရှုကိုငြင်းဆန်ခြင်းကို သတိရနေမည်၊ ယုံကြည်လက္ခံ နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကို သတိရနေမည်! ညဉ်းဆဲခြင်း၏ မီးခိုးသည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တက်လျှက် ရှိ၏ (ဗျာဒိတ် ၁၄း၁၁)။ ၎င်းဝေဒသနာမှ ခေတ္တအနားယူ၍ ရမည်မဟုတ်ပါ၊ မရပ်မနားလောင်ကျွမ်း နေပေမည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိတော့ပါ၊ နောင်တရရန်အချိန်အခါ၊ အနာ ဂတ်လည်းမရှိတောပါ။ အမှန်တကယ်ပဲနောင်တရရန် နူးညံ့သောဖိတ်ခေါ်သံလည်း ကြားရတော့ မည်မဟုတ်ပါ။ ကြောက်မက်ဖွယ် အမျက်ဒေါသလောင်ကျွမ်းခြင်းငရဲ၌ အပြစ်သား များခံရကြမည်။ (Rice, ibid, p. 27).
ကြီမြတ်၍ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်သောဘုရားရှိသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သင် လေးလေးနက်နက် မတွေးမိခဲ့သောဘုရားသည် ထိုဘုရားဖြစ်သည်။ သင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ရှိ နေချိန် နက်နက်နဲနဲ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံချိန် ဘုရားအကြောင်းတွေးကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် သင့်ကို ကြောက်ရွံ့ရမည်လား? ဟုတ်ကဲ့၊ ကြောက်ရွံ့ဖို့လိုပါတယ်! ယာကုပ်ကဲ့သို့၊ မောရှေကဲ့သို့၊ ပေါလုကဲ့သို့၊ ဘုရားရှင်နှင့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် တွေ့ဆုံခြင်းမရှိပါက၊ သင်၌မျော်လင့်စရာ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်က “ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့၍ ဒုစရိုက်ကို ရှောင်လော့” (သုတ္တံ ၃း၇)ဟူ၍ မိန့်ဆိုထားပါသည်။ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကသင့်အား “ယေရှုခရစ်၌ ရွေးနုတ်တော်သောအားဖြင့် အဖိုးမပေးရဘဲ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြရမည်အကြောင်း သင့်အားဆွဲခေါ်ပါ စေသော် (ရောမ ၃း၄-၅)။ သင်သည် ယေရှုနှင့်မတွေ့မချင်း၊ သင့်အပြစ်ကို အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြော မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါသင်သည် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့် မည်။ ဒုတိယဝိညာဉ်နိုးထရေးကာလတုန်းက ရေးသားသောဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည်!
ခရစ်ယာန်များ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် နှိမ့်ချစွာဖြင့်
(ဘုရားအမျက်တည် အပြစ်သားတို့ဆီ” အယ်လ်.အမ်လီးသီကုံးသည်၊
နေ့စွဲမသိရပါ၊ Village Hymns For Social Worship မှဖြစ်ပြီး၊ ဒေါက်တာ အဆာဟေ၊ နက်လေတန် ၁၉၉၇ မှပြုပြင်သည်။ reprint, International Outreach, P.O Box 1286, Ames, Iowa 50014).
ကျေးဇူးပြု၍ သီချင်းနံပါတ် (၄) “အသက်တော်စွန့်၏” အံ့ဖွယ်မေတ္တာဓမ္မသီချင်းသံစဉ် ဖြင့် သီဆိုကြရအောင်!
-ဒေသနာတော်မတိုင်မီ ဒေါက်တာဂရိတန် အယ်လ်ချန်မှ ဗျာဒိတ် ၁၄း၉-၁၂ကိုဖတ်ကြားပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ “တရားအမျက်တည်အပြစ်သားတို့ဆီ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးသည်။ အယ်လ်၊ အမ်လီသီကုံးသော ဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည်၊ (နေ့စွဲမသိရ ပါ)